တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်း ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ – Live the Dream
ဒီဇင်ဘာလ ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေလည်း ပြန်ဖွင့်ကြ ပြီပေါ့နော်။ ဒီနှစ်မှ တက္ကသိုလ် စတက်မဲ့ ပထမနှစ် ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကလည်း တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝကို ဖြတ်သန်းရတော့မှာ မို့လို့ ရင်ခုန်နေကြသလို အတန်းသစ်ကို ကူးပြောင်းကြမဲ့ လူငယ်တွေကျတော့လည်း ရင်ခုန်မှု တစ်မျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူး သူတိုင်းဟာ ဘဝမှာ တစ်ကြိမ် တစ်ခါလောက်တော့ တက္ကသိုလ်နေ့ ရက်တွေကို ပြန်လွမ်းဆွတ်မိကြတာပါပဲ။
ဒီလို တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀ ကို အတန်းထဲမှာပဲ စာတွေ လုပ်ရင်း အတန်းတွေ တက်ရင်း ကုန်ဆုံး သွားမှာလား? ဒါဆိုရင်တော့ အရမ်းနှမြော ဖို့ ကောင်းတာပေါ့။ ခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တွေမှာဆို အခွင့်အလမ်းတွေမှ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ငယ်ရွယ် နုနယ်ပြီး လွတ်လပ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘ၀ ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ် ကို မသိမသာ ရော သိသိသာသာရော ပုံဖော်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံး ၄နှစ် ကနေ ၆နှစ် ၇နှစ်လောက်ထိ ဖြတ်သန်းရမယ့်ကိုယ့်ရဲ့ တက္ကသိုလ်နေ့ ရက်လေးတွေ ကို အဓိပ္ပာယ် ရှိရှိ့ကုန်ဆုံးနိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်း လေးတချို့ ကို မင်မင် အနေနဲ့ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ် နော်။
အားလုံး စိတ်ဝင်စားမဲ့ အချက်လေးနဲ့ ပဲ စပြောကြတာပေါ့။ တက္ကသိုလ် တက်နေစဉ်ကာလအတွင်း မှာ ရည်းစားလေး တစ်ယောက်လောက်တော့ ထားကြည့်သင့်တယ်။ တက္ကသိုလ် မှာ FA အဖြစ် နေလာပြီး ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ သူတွေ ဘာကိုနောင်တအရဆုံးလဲ လို့ မေးကြည့်လိုက် ရင် တော်တော်များများက ရည်းစားမထားမိတာ နောင်တ အရဆုံးလို့ ပြောကြတယ်။ ကျောင်းပြီးသွားလို့အလုပ်ထဲရောက် မှ ချစ်သူရည်းစား ထားရတာနဲ့ ကျောင်းသားဘဝမှာ ထားတဲ့ ရည်းစားနဲ့ ဆိုတာ မတူပါဘူး။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝမှာ မရှိအတူ ရှိအတူ ချစ်သူလက်ကိုဆွဲ ပြီး လူငယ်ပီပီ ပျော်ရတဲ့ အပျော်မျိုးတွေက လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်လာရင် အချိန်မပေးနိုင်ရတော့တာနဲ့ ငယ်ငယ်ကလောက် မလွတ်လပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ လူတိုင်းနဲ့ မကင်းဘူးမလား။ အချစ်ကို ခံစားကြည့် ရတာတွေ အသည်းတွေ ကွဲကြည့်ရတာတွေကလည်း လူငယ်ဘဝမှာ ကြုံတွေ့ ဖူးသင့် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဘယ်အရာမဆို အတိုင်းအတာ ဆိုတာ ရှိသင့်တာမို့လို့ ယောက်ကျားလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ အချစ်ကို ခံစားဖို့ လိုတယ်ဆိုတာလည်း သတိချပ်စရာပါနော်။
၂. အားကစား လုပ်ပါ
ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းတက်တုန်းက အားကစား မလိုက်စားခဲ့မိတာ နည်းနည်းတော့ နောင်တ ရမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တုန်းကလည်း ကျောင်းမှာ ဘောလုံးအသင်းလောက်က လွဲလို့ တခြား အားကစား အသင်းအဖွဲ့ တွေက များများစားစား မရှိသေးတာ ကြောင့်လည်း ပါမယ်။ ဝမ်းသာစရာ ကောင်းတာက မြန်မာနိုင်ငံက တက္ကသိုလ် တော်တော်များများမှာ ဘောလုံး၊ ကြက်တောင်၊ ဘတ်စကတ်ဘော၊ ရေကူး စသဖြင့် အားကစား အသင်းအဖွဲ့ တွေလည်း များပြားလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အားကစား တစ်ခုခုကို ပုံမှန်လိုက်စားပေးခြင်းဟာ လူတစ်ယောက် ကို ကိုယ်ခန္ဓာ ကြံ့ခိုင်စေရုံသာမကဘဲ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကို ပါ ရင့်ကျက်လာစေတာတော့ ငြင်းဆိုစရာ မရှိပါဘူး။ တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းမှာ ကိုယ်နှစ်သက်ရာ အားကစား တစ်ခုခု ကို ကျောင်းအသင်းတွေမှာ ဝင်ရောက်မကစားနိုင်ရင်တောင် ဝါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေစု ပြီး အပျင်းပြေ ကစားတာမျိုးတော့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၃. အသင်း အဖွဲ့ တွေမှာ ပါဝင်ပါ
အသင်းအဖွဲ့ တွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှား ခြင်းဟာ ကျောင်းသားဘဝမှာတော့ မသိသာပေမဲ့ ပြင်ပ လောက ထဲရောက်သွားတဲ့ အချိန် လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် ရတဲ့ အချိန်မျိုးတွေ မှာ အကျိုး ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ် တွေမှာ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ ဖွဲ့ စည်းထားကြတဲ့ Music club, English club စတဲ့ club လေးတွေအပြင် အနုပညာ အသင်း စာပေအသင်း ဘာသာရေး အသင်း စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအသင်း စသဖြင့် အသင်းအဖွဲ့ တွေ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီလို အသင်းအဖွဲ့ တွေမှာ ဦးဆောင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေ အသစ်တွေလည်း ရလာနိုင်သလို တ ခြား ကိုယ့်ရဲ့ Leadership skills, communication skills, teamwork ဒါတွေဟာလည်း လေ့ကျင့်ပေးပြီးသား ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီလို အသင်း အဖွဲ့ တွေရဲ့ activity တွေမှာ ပါဝင်လိုက်ခြင်းဟာ ပျော်ဖို့လည်းကောင်းသလို ကျောင်းသား ဘ၀ ရဲ့ လွမ်းမောစရာ အမှတ်တရ တွေအဖြစ်လည်း လှပစွာ ကျန်ရှိနေအုန်းမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကို လာပါဝင်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်တဲ့ အသင်းအဖွဲ့ တွေများ ရှိရင် တွေဝေမနေဘဲ ပါဝင်လှုပ်ရှား ကြည့်ဖို့ အပြည့်အ၀ အားပေးပါတယ်။
၄. Senior, junior တွေနဲ့ မိတ်ဖွဲ့ ပါ
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား အများစုမှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စီနီယာ ဂျူနီယာ အချင်းချင်းကြားထဲက နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ တစ်ခုပါပဲ။ ပြီးတော့ တက္ကသိုလ် ဘဝမှာ စီနီယာ ဂျူနီယာ အချင်းချင်း ရင်းနှီးမှု ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ရောက်လာတဲ့ အခါမှာ ငယ်ငယ်ကလို ဆရာမတွေက အသေးစိတ် မသင်ပေးတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ သိချင်တဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတတွေ လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့ အကြုံတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ က စီနီယာတွေ ဆီကပဲ ပြန်သင်ယူရတာ များပါတယ်။ ဒါ့ အပြင် တက္ကသိုလ် မှာ ရှိတဲ့ စီနီယာ ဂျူနီယာ ဆက်ဆံရေး ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ရှေ့လျှောက် career အတွက်လည်း အထောက်အကူ ဖြစ်မှာ အမှန်ပါပဲ။
မိဘတွေနဲ့ အိမ်မှာ အတူနေပြီး ကျောင်းတက်နေတဲ့ သူတွေ ထက်စာရင် နယ်ကလာပြီး ကျောင်းတက်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ အများစုကတော့ အဆောင်နေကြမှာပါ။ တချို့ လည်း မိဘ တွေနဲ့ အတူ နေလို့ ရပေမဲ့ အဆောင် နေရတဲ့ အရသာ ကို ကြိုက်လို့ ကို သက်သက်လာနေ ကြတာလည်း မြင်ဖူးပါတယ်။ အဆောင်နေရသူတွေအတွက် အစစ အရာရာ မိဘ အိမ်လောက်တော့ လွယ်ကူမှာ မဟုတ်သလို အမေ့လက်ရာ ကိုလည်း လွမ်းမော နေမိမှာပါ။ ဘ၀ ကို ကိုယ်တိုင်ရုန်းကန်ရတော့မှာမို့ ခက်ခဲ ကြမ်းတမ်း နေမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်မှာလည်း လူငယ်ဆန်တဲ့ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေ တစ်ဆောင်ထဲနေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဖြတ်သန်း ရတဲ့ အမှတ်တရ တွေ ဆိုတာကလည်း အဆောင်နေ ကျောင်းသား တွေ အတွက်လည်း အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရတနာ တွေပါပဲ။
၆. စာလည်း ကြိုကြည့်ပါ
တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပျော်ပါးလာပြီး စာမေးပွဲ ရက်တွေမှာ မအိပ်တော့တာ မျိုး ကြုံဖူးလား? One subject, one night ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ လုံး၀ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာပါပဲ။ ဘာသာနည်းတဲ့ မေဂျာတွေမှာတော့ ပြသနာမရှိပေမဲ့ ၈ဘာသာ ၉ ဘာသာ ၁၀ဘာသာ ကျော်လောက်ထိ ဖြေရတဲ့ မေဂျာတွေ ဆို စာမေးပွဲ ရက်တွေက ၂ပတ်ကျော် ၃ပတ် ၁လနီးပါး လောက်ထိ စာမေးပွဲ ဖြေကြတာမျိုးတွေ မြင်ဖူးပါတယ်။ အိပ်ပျက်ညတွေ ဆက်လာတဲ့ အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဆိုးကျိုး များလွန်းတာမို့ One subject, one night လုပ်တဲ့ အလေ့အထကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာမေးပွဲ နီးမှ အသည်းအသန် စာတွေ လိုက်စု လိုက်ကျက်ရတာမျိုုး မဖြစ်ရအောင် စာမေးပွဲ မဖြေခင် တစ်လလောက် ကတည်းက စာမေးပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် ထားဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်နော်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ မင်မင်ကတော့ Live the Dream ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ် လူငယ်တွေရဲ့ တက္ကသိုလ် နေ့ ရက်လေးတွေမှာ ပျော်စရာ အမှတ်တရတွေ ဖန်တီးရင်း ကျောင်းစာမှာလည်း မလစ်ဟင်းတဲ့ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လူငယ်တွေ ဖြစ်လာပါစေ လို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။